रोचक Archives | Page2of 33 |
यो ठाँउ जहाँ नेपाली १७ रुपैयाँमा यति सुन्दरी प्रेमिका भाडामा पाइन्छ !
२०७५, ९ भाद्र शनिबार १०:५२ August 25, 2018 ताजा खबररोचक
बेइजिङ । चीनको एक सहरमा एक्लोपन महसुस गर्दै आएका युवालाई ध्यानमा राखेर भाडामा प्रेमिकाको व्यवस्था गरिएको छ । गुआङ्गडोङ्ग प्राप्तको ह्युआन सहरमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘दि भिटालिटी सिटी सपिङ्ग कम्प्लेक्स’ मा भाडाका प्रेमिका बन्न तयार युवती लस्करै उभिएका…
अनौठो जीव : ३० वर्षसम्म भोकै बाँच्छ !, १५० डिग्री तापक्रमले पनि छुँदैन
२०७५, ७ भाद्र बिहीबार १२:४९ August 23, 2018 ताजा खबररोचक
एजेन्सी। समुद्र भित्र कयौँ यस्त अनौठा जीव रहेका हुन्छन् जसलाई देखेर तपाईँ पनि चकित पर्नुहुन्छ । समुद्रमा कति किसिमका जीव छन् अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन । जति जीवकोबारेमा जानकारी मिलेको छ तिनमा सबैभन्दा ठुलो ब्लू व्हेल हो । जुन पृथ्वीमा…
सजिलैसँग मायामा फस्छन् यी राशि भएका व्यक्तिहरु
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार २१:५४ August 21, 2018 ताजा खबररोचक
एजेन्सी । हरेक राशिका प्रेमप्रतिको व्‍यवहार र रुचि फरक फरक हुन्छ । कोहि मायामा साह्रै नै इमोशनल हुन्छन् त कोहि रोमान्सको लागि धेरै रुचि राख्दैनन् । ज्योतिष शास्त्र अनुसार केहि यस्ता राशि छन् जुन राशि भएका मानिसहरु सजिलैसँग प्रेममा पर्छन्…
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार २१:५१ August 21, 2018 ताजा खबररोचक
एजेन्सी : श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अनेक उपाय अपनाइन्छन् । विश्वका अधिकांश देशमा पुरुष मानसिकता नै हाबी देखिन्छ । दम्पत्ती बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउदा दुवैले धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि श्रीमतीले अझ बढी सम्झौता गर्नुपर्ने अनुसन्धानले…
सुत्न जानुभन्दा अघि के गर्ने, के नगर्ने ? सबैले जान्न पर्ने
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार २१:४७ August 21, 2018 ताजा खबररोचक
– छिटो सुत्न नजाने । धेरै छिटो सुत्न गयो भने गहिरो निद्रा नपर्न सक्छ । सुत्न जाने उपयुक्त समय भनेको राती १० वजे देखि १०.३० सम्म हो । – निदाउनको लागि मदिरा नपिउने । रक्सी पिउने गर्दा पनि गहिरो निद्रा…
पुरुषहरूको लागि विशेष, पर्समा यी पांच चिज कहिले नराख्नुहोस, तपाइलाइ कंगाल बनाउनेछ
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार २१:४६ August 21, 2018 ताजा खबररोचक
एजेन्सी : तपाइको गोजीमा सधै पर्स हुन सक्छ अनि तपाई आफ्नो पर्ससधै पैसा ले भरिइ रहोस भन्ने चाहना राख्नु भएको हुन सक्छ । तर तपाईंको पर्समा पैसा खाली नहोस भन्न चाहानु हुन्छ,भने तपाईले पर्ससँग सम्बन्धित केहि चीजहरूको ख्याल राख्नुपर्छ।ज्योतिस शास्त्रमा…
किन फरफराउँछ आँखा ? यस्ता छन बैज्ञानिक कारण
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार २१:४५ August 21, 2018 ताजा खबररोचक
एजेन्सी : आँखा फरफरायो भने कुनै घटना वा खबर प्राप्तिको संकेत हो भन्ने विश्वास हाम्रो समाजमा गरिन्छ । आँखाको फरफराई पनि महिला र पुरुषमा अलग–अलग तरिकाले विश्वास गरिन्छ । कुनै समाजमा पुरुषमा दाहिने आँखा फरफरायो भने शुभ समाचारको सूचक मानिन्छ…
किन टाउको दुख्छ ? टाउको दुखाइका कारणहरु हेर्नुहोस
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार २१:४३ August 21, 2018 ताजा खबररोचक
एजेन्सी : ‘कस्तो टाउको दुखिरहेको छ’ भन्ने मानिस हाम्रा वरपर प्रसस्त भेटिन्छन् । सायदै मान्छे होलान् जसको कहिल्यै टाउको नदुखेको होस् । टाउको दुख्नुका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । कुनै कारण सामान्य हुन्छन् त कुनै जटिल । ‘टाउको दुखेको त…
छिट्टो रिस उठ्ने समस्या हैरान हुनुहुन्छ ? यदी हुनुहुन्छ भने यसो गर्नुहोस
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार २१:४० August 21, 2018 ताजा खबररोचक
एजेन्सी : अचानक रिस उठ्ने आफ्नो बानी देखेर वाक्क हुनुभएको छ ? हामीमध्ये धेरैलाई रिसाउनु राम्रो होइन भन्ने थाहा छ, तर यति हुँदा हुँदै पनि स्वभाव र परिस्थितीले मानिसहरु पटक–पटक रिसाइरहेका हुन्छन् । यस्तो बानीले धेरै मानिसहरुलाई हानी पनि पुर्याइरहेको…
यसकारण गर्नुहुन्न ३० बर्ष भन्दा ढिलो बिवाह
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार २१:३९ August 21, 2018 ताजा खबररोचक
एजेन्सी : नेपालमा पनि ढिला बिवाह गर्ने परम्पराको विकाश भइसकेको छ । ढिला बिवाह गर्दा धेरै कुराहरु राम्रो हुने भएपनि केही कुराहरुमा भने असर पार्ने तथ्यले देखाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको एक नयाँ अध्ययनका अनुसार ३० वर्षपछि आमा बन्ने महिलाद्वारा…